Tsiahy – Mozika : nanamarika ny 2015 ny « gweta » | NewsMada
Na taty an-tanàn-dehibe na tany ambanivohitra, na tany amin’ny hotely sy « espaces » goavana na tany an-tokantrano, eny, hatreny an-dalambe aza, tsy nisy tsy nandihy tamin’ny « gweta », tamin’iny alin’ny faran’ny taona sy nitsenana ny taom-baovao iny. Tsy nahagaga ! Nanamarika iny taona 2015 iny ity gadona arahina dihy manokana noforonin-dry Toofan, avy any Togo, ity, raha ny teto amintsika no resahina. Voasarika avokoa ny ankizy, ny tanora hatramin’ny lehibe. Tsy ny olon-tsotra ihany no mahita fa mahafinaritra ny « gweta » fa hatramin’ny mpanakanto malagasy koa aza. Tsy vitsy ireo manafangaro azy amin’ny gadona hafa, toy ny R&B.
Tsara ny manamarika fa tarika togoley niorina tamin’ny taona 2005 ny Toofan, ahitana mpikambana roa : Masta Just sy Barabas. Efa hatramin’izany fotoana niorenany izany no nahavariana ny feon-javamaneno sy ny dihy nentin’ireto tovolahy ireto. « Cool-catché » ny niantsoan’izy ireo izany.
Efa tamin’ny taona 2013 kosa no nivoaka ny « gweta », saingy tamin’iny tapany faharoa tamin’ny 2015 iny izany vao tena nalaza teto amintsika. Ankoatra ity gadona ity, nampalaza an-dry Toofan koa ny namoronan’izy ireo ny hira fanevan’ny fiadiana ny amboaran’i Afrika na ny Can, amin’ny taranja baolina kitra, ny taona 2012 sy 2015.